Labbo ruux oo koonfurta magaaladda Stockholm lugu dhaawacay | Somaliska
Labbo ruux oo koonfurta magaaladda Stockholm lugu dhaawacay
Labbo ruux ayaa lugu soo waramaa in loola cararay isbitaalka ka dib markii dhaawac ka soo gaaray xabado ka dhacay koonfiurta magaaladda Stoclholm ee caasimadda Iswiidhan.
Goob joogeyaal u waramayey saxaafadda ayaa sheegay ineey arkeen booliska oo adeegsanaya diyaaraha qumaatiga u kaca ee helikobar iyo gaadiid kale ay gaaf wareegayeen iyagoo xiray wadooyinka goobta ay ka dhaceen tacshiiradaas.
“Saacadu markeey aheyd sadexdii galabnimo ayaa goob joogayaal nugu wargeliyeen in xabado ay ka dhaceen wadada Östbergatorget, waxaana adkeeyd inaan ka hadalno goor hore sida dhaawaca uu yahay” ayey tiri Åsa Wallentin, oo ah afhayeenka booliska Stockholm.
Booliska ayaa ila hadda ku raad joogo dableey ku hubeeysan qoryaha atomaatikada u dhaca oo la sheegay ineey ka baxsadeen baabuur cad. Balse booliska waxaa ay sheegeen in falkani ahaa mid isku day dil ah iyo hub si sharci darro ah loo adeegsaday.
“Cuntadii ayay ku qanci waayeen ka dibna rabshado ayay sameeyeen”